LAMAS PRO ANR : « Fandresen’ny Malagasy ny fandresen’ny Filoha Rajoelina »
Miditra amin’ny andro faha-4 ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana izay ho Filoham-pirenena. 11 octobre 2018
Ho an’ny ao Toamasina, dia mbola kandida telo no tena efa mihetsiketsika fatratra amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra, anisan’izany ny mpomba an’i Andy Rajoleina.
Ho an’ny mpomba an-dRajoelina, dia miparitaka any amin’ireo fokontany 138 ny ekipa mpanao fampielezan-kevitra. Anisany manao ezaka mafy ho amin’ny fampandaniana ny kandida laharana faha-13 ny Pro ANR Toamasina.
Raherinandrasana Jean Victorien, fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Lamas no mpandrindra provinsialy ny Pro ANR Toamasina. Izy izay efa nanohana an’i Andry Nirina Rajoelina nanomboka ny tolom-bahoaka 2009 ka hatramin’izao. Tsy nivadi-belirano ary azo ambara fa tanora mafana fo amin’ny fampandanina ny kandida laharana faha-13.
Nandritra ny tafa nifanaovana taminy ny antoandron’ny alarobia 10 oktobra teo, dia nanambara i Lamas fa anisany antony naharesy lahatra azy amin’ny fanohanana an’i Andry Rajoelina ny fananan’ity farany vina mazava entina hitondrana ny tany sy ny fanjakana. Maro ireo mpitondra nifan-dimby fa tsy nanana vina mazava nitondrana an’i Madagasikara ka nahatonga ireny tsy fahombiazana lava ireny, hoy hatrany i Lamas.
Noraisiny, ohatra, ny fanamboarana ny lapan’ny tanànan’ Antananarivo izay may tamin’ny taona 1972 fa taty amin’ny fitondran’ny filoha Rajoelina vao tafarina. Maha-kasika ilay kianja manara-penitra Stadium Barikadimy, dia nanana finiavana ny filoha Rajoelina hamita ny asa saingy rehefa tafakatra teo amin’ny fitondrana Rajaonarimamampianina dia tsy nivaky loha tamin’ny famitana izany. Azo antoka fa hofaranan’ ny filoha Rajoelina ny famitana io kianja io rehefa tonga eo amin’ny fitondrana ny tenany, hoy i Lamas. Nomarihiny fa miasa any anaty komity mpanohana rehetra any ny Pro ANR Toamasina. Miasa eny anivon’ny komity mpanohana distrika (IRD), any amin’ny komity npanohana eny anivon’ ny Kaominina ( IRK) ary ny eny anivon’ny fokontany na ny IRF. Fampandresena ny filoha Rajoelina no fanamby.
Midika fandresen’ny Malagasy rehetra mantsy ny fandresen’ny kandida laharana faha-13. Fandresen’ny filoha Rajoelina no mamarana ny geja sy fahantrana nentin’ny HVM, hoy hatrany i Lamas Pro ANR.
Mifanitsa-kitro hatrany izay toerana alehany
Tafiditra ao anatin’ny fampielezan-kevitra tanteraka ireo kandidà hifaninana amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’izao fotoana izao. Ho an’ny kandidà Andry Rajoelina, laharana faha-13 manokana dia fahombiazana hatrany no hita tamin’ireo fitetezam-paritra nataony. Ny Faritra avaratry ny Nosy iny no nanombohan’ny kandidà laharana faha-13 ny fampielezan-keviny ny alatsinainy lasa teo. Nisantatra izany tao an-tampon-tanànan’ Antsiranana izy ary nikisaka avy hatrany nitety ireo Kaominina mandrafitra ny Distrikan’Antsiranana faharoa indray izy taorian’izay.
Mifanitsa-kitro hatrany ny olona amin’izay toerana rehetra alehany, feno hipoka ihany koa ny kianja rehetra izay anaovany ny famoriam-bahoaka. Liana ny vahoaka izay mangetaheta fandrosoana hany ka ampy hamelona ny fanantenan’izy ireo na dia mifanatri-tava amin’ny kandidà Andry Rajoelina fotsiny ihany aza. Hatreto dia Distrika manodidina ny valo no efa voatetin’ny kandidà laharana faha-13. Fahombiazana hatrany no azony, miraradraraka ny fampanantenana isak’ izay faritra andalovany ary vonona hifanome tanana aminy ny vahoaka fa hiara-hitondra fampandrosoana an’i Madagasikara.
Kamy sy Avotra Isaorana